Блоги друзей minthu1981 / Бесплатный видео чат Conferendo
Посты друзей minthu1981
* ကံ၊ ကံ၏အကျိုး *
* မကောင်းသောကံ၊ ကောင်းသောကံ အမှန်ရှိလေသည်။ * အမှန်မြင်မှု၊ အစဉ်စု ကုသိုလ်တိုးပွါးစည်။ * ကံ၊ကံ၏အကျိုး၊ ယုံကြည်တိုး အကျိုးမြတ်တော့မည်။ * လှူမှုအကျိုး၊ ယုံကြည်မှုတိုး ဒါနတိုးပွါးစည်။ * သီလအကျိုး၊ ယုံကြည်မှုတိုး အကျင့်ဖွံ.ဖြိုးမည်။ * ဘာဝနာအကျိုး၊ ယုံကြည်မှုတိုး ကိလေသာကျိုးတော့မည်။ * မှန်စွာမြင်ခြင်း၊ စိတ်ဝယ်ထင်း အသိဉာဏ်လင်းတော့သည်။ သီဟ(ရေဦး)
* ယုံကြည်မှုသက်သေ *
* ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ. အချစ်ကိုသက်သေပြဖို.
* အချစ်ဆိုတာ နူးညံ့သိမ်မွေ.တယ်ဆိုရင်
* မနိုင့်တနိုင် အထုပ်အပိုးတွေထမ်းရင်း
အလွမ်းတွေနဲ. ဆက်လျှောက်ရင်း လျှောက်ရင်း
* အလွမ်းကမ်းခြေ *
* ဂီတတေးသွား နားဝဆီပြေးလာ
* အိမ်ပြန်ငှက်တစ်ထောင် အိပ်တန်းပြန်ချိန်
ဇိမ်မရှိတဲ့ ကိုးလိုးကန်.လန်. စမ်းချောင်းပေါ်အရိပ်ထင်
* နံရံကပ်ရှုခင်းစာတစ်ရွက် ရှေ.တည့်တည့်
လူတစ်ယောက် ရွက်ဖြူတစ်ရွက် လှေငယ်တစ်စင်း
* ကျွန်တော်..မသိလို.ပါ *
* မ..လာမယ့်လမ်း မျှော်မှန်းတမ်းတ အထီးကျန်နေ.ည ရှည်လျားလှပေါ့။ * တွေ.ပြန်သော်လည်း မခေါ်ရဲတော့ အားငယ်စိတ်ဝင် ငိုချင်ချင်လေ။ * ရင်မှာတိတ်တခိုး ကြိတ်ပိုးရင်းနဲ. အချစ်သူခိုးတော့ မဖြစ်ချင်ဘူးဗျာ။ * ဒီတစ်ခါပြောမယ် တကယ်ပြောမယ် ဆုံးဖြတ်သော်လည်း တချို.ကပြောကြ မင်းမှားမယ်နော်။ * ငါဒီလောက်မတုံးဘူး ဖုန်းဆက်ပြောမယ် အကောင်အထည်ဖော်တော့ မရဲ.စကား ဟုတ်ရဲ.လားဗျာ `ငါ့မောင် မက အိမ်ထောင်သည်နော်´။ ရဂုံ(ရေဦး)
* စိတ်အလိုလိုက် သိပ်မိုက်တဲ့ငါ *
* ဘ၀တစ်ကွေ.မှာ ဒို.စတွေ.တော့ ငါဆိုတာ ခပ်ချာချာ လူတစ်ယောက်ပါ။ * သကာကြွယ်စကားတွေနဲ. အချစ်ကိုလှည့်စား နင့်အကြောင်းကြားရတာ ငါနားခါးလိုက်တာဟာ။ * နင့်အလှမှာယစ်မူး ငါကြည်နူးနေတုန်း ရေလာဖို.မြောင်းပေး အကြင်နာတွေ စတေးတော့ ငါဘယ်ပြေးနိုင်မလဲ။ * နင့်ရဲ.ချစ်ရည်လူးစကား ခဏခဏကြားရတော့ အားလုံးအဟုတ်ထင် နင်မှနင်ပဲ။ * အချိန်မဆိုင်းဘဲ နင်ခိုင်းသမျှ လိုက်လုပ်ရတာ ဖန်တစ်ရာတေလည်း ငါကျေနပ်ဆဲပါ။ * ၀ဋ်ကြွေးထူတယ်ပြောလည်း မငြူစူတဲ့သဘောက ငါ့ရင်ထဲမှာ အပြည့်ပဲလေဟာ။ * ဒီလောက်အလိုက်တသိနဲ. ချစ်မိနေတဲ့ငါ့ကို ဘယ်အချက်တွေကြောင့် စိမ်းရက်ခဲ့တာလဲ။ * နင်မရှိတော့ နင့်နာမည်ဟစ်ကြွေး တသသ ပူဆွေးရတာတွေ ငါမှ အခြားဘယ်သူများ သိခဲ့မှာလဲလေ။ * နင်အမြင်မှန်ရပြီး ငါ့ထံပြန်လာတော့လည်း ဟို အရင်ကလို အပြုံးမပျက်နေပေးခဲ့တာ သိပ်ချစ်လွန်းလို.ပါဟာ။ * နောက်ထပ်မဝေးကြေး အသက်ပေးချစ်မယ် နင့်ရဲ.စကား ငါကြားရတော့ ကြည်နူးလိုက်တာ တကယ်ပါပဲ။ * မမြင်ချင်တဲ့မြင်ကွင်း မကြားချင်တဲ့စကားကြောင့် သံသယဆိုတာ တခါတခါတော့ ရောက်ရောက်လာတယ်ဟ။ * ဒါပေမဲ့လေ နင့်အပေါ်ချစ်စိတ် ယိုဖိတ်နေတော့ နင်ပြောသမျှ နာခံရတာ မဆန်းပါဘူးကွာ။ * ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ငါဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာ နင်သိနေရင် ကျေနပ်ပါပြီ။ * ရှေးလူစကား ငါကြားဖူးတယ် ကျွန်ယုံတစ်ဖက်ကန်း သားသမီးယုံစုံလုံးကန်း တဲ့ ချစ်သူ… အခုတော့ ငါနားတွေပါကန်းနေပြီဟာ။ - ရဂုံ(ရေဦး)-
* အချစ်ကျိန်စာ *
* မင်းရော… သစ္စာဆိုရဲလား ဘုရားရှေ.မှာ ဘယ်ယောက်ျားလေးနဲ.မှ မဖောက်ပြားခဲ့ဘူးဆိုတာ..။ * ရှင်ရော…သစ္စာဆိုရဲလား ဘုရားရှေ.မှာ ဘယ်မိန်းကလေးနဲ.မှ မဖောက်ပြားဘူးဆိုတာ..။ * အဲဒါ..အချစ်ကျိန်စာပါဘဲ ကွဲကြလေသတည်း.. ကိုယ်တွေ.။ – စည်သူ(မြန်မာစာ)-
* ကိုရီးယားရောက် သိန်းဆုပေါက်ကာ မိန်းမတွေကို လုပ်ကျွေးနိုင်သော `နွား´ကောင်းသဖွယ်…. သြော်..ဒုက္ခ..ဒုက္ခ..ဒုက္ခ။ စည်သူ(မြန်မာစာ)
* ဘုရင်မပါဝါ *
* ချိုမြိန်တဲ့ အပြုံးတစ်ချက်နဲ. ငါ့ပလ္လင်ကို အပိုင်စီးပြီး ငါ့နှလုံးသားကို ချုပ်ကိုင်တော့ ငါဆိုတာ သူစေရာပေါ့။ * ရွှေနှုတ်တော်က မိန်.မူသမျှ နာခံရန်အသင့်ဆိုတဲ့`ခံယူချက်´ သူဘယ်လိုရိုက်ထည့်လိုက်တာလဲ။ * ငါ့ကိုငါတောင် ဘာမှန်းမသိအောင်ပြုစား ငါ့နန်းတော်ကို အပိုင်သိမ်းပြီး စိမ်းကားမှုကို ကင်းချထားတော့ ငါ ဘယ်လိုနေရမှာလဲလေ။ * ငါ့အပေါ်ရက်စက် သူလုပ်ရက်တယ် တစ်နေ.သိမယ်လို. လုပ်ကြံဖို.အရေး ဖန်ခါခါတွေးပြီး တိတ်တဆိတ်ချဉ်းကပ် အသေသတ်မယ် ရည်ရွယ်ခဲ့လည်း တကယ်တမ်းကြတော့ ငါပဲ ငိုချင်းချပြန်ခဲ့ရတယ်။ ရဂုံ(ရေဦး)